Kadib Ciyaar Waali Ah Kooxaha Juventus & Tottenham Oo Ku Hehsiiyay Bar-baro – Kooxda.com
Home 2018 February Champions League, Ingiriiska, Italy, Wararka Maanta Kadib Ciyaar Waali Ah Kooxaha Juventus & Tottenham Oo Ku Hehsiiyay Bar-baro
Kadib Ciyaar Waali Ah Kooxaha Juventus & Tottenham Oo Ku Hehsiiyay Bar-baro
Kulan xiiso leh oo ka dhacay garoonka Allianz Stadium kana tirsanaa lugtii 1-aad ee wareega 16-ka tartanka champions league una dhexeeyay kooxaha Juventus iyo Tottenham ayaa ku dhamaaday bar-baro.
Kulanaka ayaa si dar-dar leh ugu bilowday kooxda Juventus iyaga oo daqiiqadii 2-aadba dhaliyay goolka 1-aad iyaga oo uu si qurux badan ugu dhaliyay xiddiga weerarka uga ciyaara ee Gonzalo Higuain kaas oo hogaanka u dhiibay kooxdiisa.
Juventus ayaa wacdarihii ay ku bilowday sii waday isla daqiiqadii 9-aadna dhalisay gool kale iyaga oo uu rikoore u dhaliyay isla weeraryahanka Gonzalo Higuain kaas oo hogaanka u sii dheereeyay kooxdiisa kana dhigay ciyaarta 2/0.
Kooxda Tottenham ayaa dhankeeda bilowday in ay hurdada ka kacdo iyada oo qaadaysay weeraro waali ah si ay isaga soo bado goolasha.
Tottenham ayaa daqiiqadii 35-aad dhalisay goolka 1-aad iyaga oo uu u dhaliyay weeraryahankeeda Harry Kane kaas oo ciyaarta dib u soo nooleeyay kana dhigay 2/1.
Juventus ayaa mar kale fursad u hesho in ay dhaliso goolka 3-aad kadib markii daqiiqadii 45-aad rikoore loo dhigay laakiin Gonzalo Higuain ayaa birta sare ku dhuftay.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybtii hore ee ciyaarta oo ahayd mid waali ah oo ay labada kooxoodba soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiib ah.
Qaybtii dambe ee ciyaarta ayay Tottenham ku bilaabatay si dar-dar leh halka ayn Juventus ka dhicin iyaga oo is weydaarsanayay weeraro aan kala joogsi lahayn.
Juventus ayaa dhawr mar ku dhawaatay in ay hogaanka sii dheeraysato laakiin way u suurgo gali wayday si la mid ah kooxda Tottenham.
Tottenham ayaa ugu dambayn ku soo laabatay ciyaarta iyaga oo uu goolka bar-baraha u dhaliyay xiddiga Christian Eriksen kaas oo daqiiqadii 72-aad laag xor ah oo hoose ku xaday goolhaye Buffon ciyaartana ka dhigay 2/2.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo ku dhamaatay bar-baro ay labada kooxood isku mari waayeen iyada oo haatan Tottenham ugu cad-cadahay in ay u soo baxdo wareega xiga